Qore: Abdulkadir Mohamoud Walayo
Waxaa la qiyaasi karaa in fulinta hawshaasu aaney sahlanayn oo waqti badan ka qaadan doonto muddo 4 sano ee loo qoondeeyay mamulka cusub ayagoo isla waqtigaas nidaamka u soo tuuri doona wax san-dareerto ah oo “ha-dhiman hana noolaan” ah. Ficilka foosha xun waxaa looga samatabixi karaa in fahamka Soomaalida ka koro qabiilqabiilka, casabiyada, goboleysiga iyo nin-jecleysiga ama necbeysiga iyo dagaalada ilaa hadda dalka ka socda oo ujeedo iyo ka jeedo doona aan midna lahayn.
Madaxweynaha Jumhuuriyadda Somalia, Prof. Hassan Sheikh Mohamoud iyo Ra’iisal Wasaraha la magacaabay, Abdi Faarax Shirdoon (Saacid) iyo xukuumada la soo dhisi doono maxaa yididiilo ah uu shacabku ka filaya mustaqbalka dhow?
Haddaba, waxaa in la is weydiyo istaahila sidee ISBEDEL-DOONOW baa wax loo badalaya? Maxaa la bedelaya? Yaa wax bedelaya? Hangool noocmaa isbedelka loo adeegsan kara ? Sababta iyo baahida keentay in wax la bedelayose maxay tahay? Yaa loo maleyn karaa oo diidi doono inuu idhaco sbedelka?
Isbedel waxaa kaloo lagu sifeeya in meesha gebi ahaanba laga saaro jawrfal iyo qaladadka oo dhan noocuu doono ha ahadee oo hore u soo dhacay. In dhabe cusub loo jeexo hab wacan oo looga bixi karo ficilada xumaa ee la soo maray. In la soo rogo hab wacan oo xaqiijin kara sidii faraha loogala bixi lahaa jidkii silloona ee dadku lagu soo hoggamiyay oo la soo celiyo kalsoonida Soomaalida isku qabateen ayaga dhexdooda iyo tan dawladda intaba. Fasirka kalimada isbedel intaas waa ka badan yahay, waxaanse ku soo koobi lahaa isbedelka waa wax duug ah oo dib-u-dhac keenay oo lagu bedelo wax cusub oo loo asteeyayo in horumar doc walba ah lagu gaari karo.
Sidaa darteeda isbedelka siyaasada gudaha wuxuu noqonaya muuriyad laga daawado siyaasadda dibedda si kolkaas uu u hagaago la tacaamulka beesha caalamka iyo hinjinta diblomaasiyda kolkaa caalamka ka socota ayadoo ay ugu horeyso sidii faro-dhuudhuuban looga soo far-iyo-suulin lahaa arrinta murugsan ee Somalia oo in muddo ah sii dhex maquureysay qaabi weji caalami yeeshay oo wadamado badan – gacal iyo nacab - ay dano si toos ah iyo si dadbanba ugu yeesheen.
Waxaa kolkaas loo baahan inla helo diblomaasiyiin Soomali ah oo aqoon durugsan u leh maamulka xiriirka dawliga isla markaana ay awoodaan inay waanwaan iyo wada xaajood ka geli karaan sidii caalamka ay uga iibin lahayeen siyaasad cad oo cusub oo la rabo Somalia inay mustaqbalka la yeelato adduunka intiisa kale gaar ahaan wadamada deriska, qaarada Afrika, Dunida Carabta iyo Islaamka iyo dhamaan beesha caalamka. Ragga noocaas ah waxaan qabaa inay hadda joogaan oo la heli karo haddii la isku dayo in la baadi goobo waxayna karaan inay la tacaamulaam geesaha isku haya oo danaha is-hertiyaya kale leh dalka iyo dadka Soomaaliya. Waxaa la ogsoon yahay marka ay socota hinjinta cilaqaadka dawliga ee adduunka in cid ixsaan cid kale u sammeneyso ma jirto waxaana mar kasta gacanta sare yeelan karta cidii aqoon durugsan u leh dhaqanka cilaqaadka duwaliga.
Jagooyinka dawladda dadka loo dhiibayo waa inay xilkaas ku qabtaan inay istaahilaan ayadoo loo marayo waxaa loo yaqan “meritocracy” oo si hoose looga fiirinaya xagga aqoonta, kaska caqliga iyo waaya-aragnimoda. (Inkastoo ay tahay arrin xaraan, haddana dadka qaar ayaa waxay qabaan inay fiicnaan lahayd in habka 4.5 ay qabaa’lku si xaq ah wax ugu qaybsadaan marka laga hadlaayo maamulka dawlada. Dadkaasu waxayse hadda ku doodayaan in nidaamkaas oo marki hore fool xumaa hadda uu weji kale yeeshay oo looga sii gudbay mid ka sii liita oo ah 2.0 oo reero gaar ah ay darajada dalka ugu sarreysa ay ku dhex wareegeyso). Hadii la rabo in la gaaro isbedel ka soo bilowda xaaga jirida hoose, waa in kaabo qabiilada iyo oday dhaqameedyada iyo dadka shaxaad doonka ah ee raba inay si musuq ah wax ku heelaan aan lagu arag xafiisyada dawladda gaar ahaan kuwa ay is leeyihiin waxa xafiiska jooga oo fadhiya qof idinku reer ah oo si sharci darro wax idiinku sad-buursiin kara.
Waa muhiim in arrimahaas dib loo fiiriyo oo la saxo waxayna tallabadaasi ka mid noqon doontaisbedelka xukuumada hadda la imaan doonto haddii ay dhab ka tahay isbedel doonimada
Dawladdu waa in aney ku siinaan oo aaney isku reebin agagaarka Villa Somalia oo dadka soo gaarto oo ay ka soo baxdo halkaas oo bal marka hore isku fidiso caasimada isla markaana la furo albaabada Wasaaradaha Dawladda soona shaqo tagaan shaqaaliha dawlada ee hore xitaa kuwa hawl-gabka noqday ee isugu jira ciidan iyo rayid waayow waxay kuwaas noqon karaan macalimiin shaqaalaha cusub tababara. Dawladu waa inay keento siyaasado dib dalka loogu soo celinayo maskax-guurka (brain-drain) ku dhacay Soomaalia oo maskaxdaas qaar laga yaabo inay si mutadawacnimo oo bilaa mushaar ah ku shaqeeyaan muddooyinka hore inta ay dawladdu ka soo koryeso.
Hoggaanka sare ee Baramaanka waa inuu soo rogo anshaxa dhaqameed xildhibaanadii hore ay ku dhaqmaan oo lagu xakameyn doono hab-dhaqankii hore iyo qaabka mooshinka ee Barlamanada hore dilooday. Xildhibanada waxaa hore looga bartay inay culeys dheeri ah ku ahayeen habsami u socodka hawlaha barlamaanka sidaa darteed waa in lagu tirtirsiiyo inay bedelaan habd-dhaqankaas hore. Xaaladda dalku joogo marka hadda la fiiriyo siduu yahay, xildhibaanda barlamaanka waa inay habeen iyo maalinba shaqeeyaan oo ay maskaxda shiilaan si afarta sano ee socota ay ummada u qabataan wax loo aayo oo loola jeedo in dalka looga badbaadiyo qatarta uu hadda dalku ku jiro iyo mida ku soo fool leh ee ku soo socota labadaba.
Waxaa dalka jooga Garyaqaanada Dasatiirta (constitutional lawers) oo Garsoorayaal ka noqda maamulka hawalaha maxkamada Dustuuriga ayagoo hadba kormeeraya in loo hoggaansamo ku dhaqanka dustuurka iyo xeerarka kale ee isla dustuurka ka soo farcamay. Waxaa na soo maray marmar badan marka ay wax isku qabtaan madaxda in looga yaeero dalka dibadiisa loona soo meeriyo sidii ay ku kala bixi lahayeen taasoo dhaawac u geystay gobannimada iyo shafaka ummdda Soomaliyeed.
Ficilkaas noocaas ah wuxuu dhalay waxa loogu yeero Heshiiska Kampala oo madaxda Soomaalida oo heshiiskaas saxiixday ay in badan hoggaaminta dalka gacanta u geliyeen shisheeye. LA XIRIIRKA WARBAAHINTA
Dawladdu waa in dawladda inyay soo saarto awaamir tallaabooyin lagu xakamaynayo Masuuliyiinta dawladda hab-dhaqanka ah in warbaahinta gudaha iyo dibedda lagu falanqeeyo arrimaha idaariga ee hoose ee dawladda u gaarka ah ama ha noqdo xildhibaan ama ha noqdo wasiir ka tirsan golaha xukuumada ama heer kaleba ha jooge waa in gebi ahaanba mustaqbalka la joojiyo. Xubin Barlamaan ama xubin golaha xukuumada waa in ay fekerkooda si cad uga dhex sheegtaan marka ay fadhiyaan golayaasha ay xubinta ka yihiin oo arrinta miiska saaran fekradooda ka dhiibtaan sida ay ula muuqato isla markaana u hoggaansamaan go’aanka inta badan isku raacday oo loo badan yahay haddii xitaa ay qabaan fekerka kan la isku raacay ka duwan. Marki madaashaas la joogo wax kastoo ka dhex dhaca maamulka dawladda gudihiisa heer kasta ha joogeen waa inaan loo isticmaal warbaahinta.
Waxaa hadda laga fekeraya in ciidamada shisheeyaha la gaarsiiyo tiradooda min 12,000 ilaa 17,000 oo askari taasoo kor u sii qaadi doonta kharashka ciidamada ku baxaya mustaqbalka. Dhaqaalahaas ay ciidamada shisheeyaha ka helaan Soomaliya kasokow, waxaa intaas u dheer wadamada Afrikaanka ah inay han weyn u qabaan sidii ay meel uga heli lahayeen xeebaha Soomalida bacdamaa ay u badan yihiin wadamo aan xeebo lahayn (landlocked) taasoo qatarteeda iska leh.
Sidaas si la’eg ardaydaka soo baxday dugsiyada hoose iyagana la siinayo tabarbarka hawlaha boliiska iyo ciidamada kale si looga baxo gacanta maliishiyo beleedka la leeyahay waa ciidan dawlad hadana is rasaaseeya oo isku dila hubka dawladda isla markaana galaafta dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Ra’isal Wasaraha cusub ee Soomaalia, Abdi Farah Shirdoon ayaa arrintaas iyo arrimo kale oo danta Soomaalia ka hadlay intaan dhowaan loo dooran jagada RW waxaana warysi uu siiyay mid ka mid ah idaacadaha la iska arko ee Soomaalida . Linkan daawo Ra’isal Wasaaraha oo ka hadlaya rajada Somalia: http://www.youtube.com/watch?v=CO2E3Otuhls
Dawladda waxaa laga rabaa inay dejiso qaab wada hadallo lagula galayo walaalaheena Somaliland iyo mucaaradka ee hubeysan ee dawladda ka soo horjeeda. Qadiyada Somaliland iyo dagaalada hadda dalka ka socda waxa labadaba la garan karaa inay ka soo jeedaan cadaala darro muddo dheer soo jirtay oo dadka qaar laga soomiyay inay qayb ku yeeshaan cunista keeka qaranka qaybti ay ku lahayeen iyo tacadiyo xagga xuquul insaanka loo geystay walaalaheen ku dhaqan Somaliland. Gaar ahaan walaalaheen Somaliland waxaa laga rabaa dawladda Soomaliya inay wax ka badan ugu abaal gudo doorka Somaliland ay ku lahayd israaca labada gobol ee Koonfur iyo Woqooyiga Soomaliya. Somaliland waa in garowshiyo garoocasho loogu muujiyo wixii la gaarsiiyay,
Marka laga reebo waxyaabaha warbaahinta lagu shaaciyay, aniga intaan ogahay maan arag malaf qoraal ah (package of reconciliation) oo dawladaha KMG ee soo maray dalka la soo bandhigay oo walaalaheen Somaliland iyo mucaaradka lagula hadlayo ama xiriro hoose dad looga qaateen ah ay la sameeyeen isla mucaaradka. Waa in dawladdu soo saarto siyaasado dawo u noqon karta waxyaabaha ay tirsanayaan walaalaheen Somaliland. Waa in xukuumada cusubi isku dayday inay tallabada cad ay ka qaado mucaradka hubeysan ee ka soo horjeeda oo ay wada hadallo kula galayso.
Kalimada Banadir waxay asal ahaan ka soo jeeda luqada Persian ka ah ee Bandar taasoo macnaheedu yahay marso ama deked ayadoo loola jeeday magaalooyin marseedka gobolka benadir ee Somalia ee Muqdisho,Marko iyo Baraawe. Magaca Muqdisho isagana waxaa lagu fasira “maqcadu Shaah” xarunta shaaha Persia.
Waa in la bedelo manhajka waxbarashada oo haddii ay suuragal tahay la soo celiyo manaahijtii jiri jiray kaddib markii xoriyadda la qaatay ee 1960 ila 1969 isla markaana dadka si fiican loo baro aqoonta casriga iyo culuunta diinta islaamka. Mudadaas waxay dadku wax ku barayeen dhammaan maddooyinka luqadaha Carabiga, Talyaaniga iyo Ingiriiska min dugsiyada hoose ilaa heer jamacadeed.
Ururka ardayda Soomaaliyeed ee Masar oo ilaa hadda ka furan wadada 36aad ee Sharif Basha ee magaalada Qaahira waxaa kontameeydii aasaasay Marxuum (AUN) Maxamuud Xarbi oo ahaa halyey gobannimadoon Soomaaliyeed ah. Dalka Masar waxaa ka soo aflaxay haddana waxbarasho heerar kala duwan u joogodhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku kala jira waxbarashada heerarkeeda kala duwan. Qaar ka mid ah sarakiisha Soomaalida waxay wax ku soo barteen Kulliyada Xarbiga ee Masar.
Dadka ka soo aflaxay wabarshada noocyadaas ahayd ayaa ahaa Gobollada woqooyi ee dalka Somaliyeed waxaa wax lagu baran jiray afafka ingiriisiga iyo carabiga ayadoo ay dhalinyarada woqooyiga ay waxbarasho sare u aadi jireen dalalka Sudan iyo Ingiriiska.
Mmaadada barashada wadaniyada iyo madaninimada ujeedada laga leeyahay waxa tahay in si degdeg ah dadka looga saaro dhaqanka baadiyonimada gaar ahaan dadka magaalooyinka waaweyn gaar ahaan caasimada soo galay 20 sano ee burburka kuwaasoo badankooda leh dhaqan baadiyonimo.
Run iyo been waxay tahay ma garan karo, laakinse waxaa dadku ku xantamaan in maamulka la riday madaxdiisii ay qirteen in dal mooye aan dad laga dhaxli doonin waayo waxay ogaadeen in dadka heerkooda tacliinta inuusan ahayn heer aqoon sare oo wadaniyad iyo magaaljoognimo ilbax ah leh. Haddii aad u sii fiirsato waa tan maanta dalka heysta oo dadku ay noqdeen kuwa is nacay cid kaloo rabtana aaney jirin adduunyada. CAAFIMAADKA
Hadda waxaa dalka la soo geliya cunto tayadeedu hooseyso oo dhacday oo meelaha laga soo daabulay lagu tilmaamay in cuntadaas ay ka hooseyso heerkii bani’aamdigu iyo xooluhuba quudan lahayeen. “Unfit for human consumption”. Waxaa la sheegay inay jiraan ganacsato soo iibsatada cuntadaas la rabay in bada lagu shubo oo u soo weeciya Soomaaliya kaddibna marka kale ku cabeeya jawaano ayadoo dadka laga siinayo qiimo aad u badan. Taas waxay keentay in dadka ay ku yaraato nafaqada qaar kalena ay ku dhacaan cuduro sida kaansarka oo kale halka ganacsatadaas ay si xad dhaaf ah uga taajireen ganacsiga xaraanta ah .
DHOWRISTA DEEGAANKA Waa in gebi ahaanba la joojiyo dhirta sida aan kala sooca lahayn loo jarayo iyo dhuxusha dibedda loo dhoofiyo intaba isla markaana la qaado olole lagu dhireynayo dhulka la xaalufiyay si dhulka looga ilaaliyo nabaadguurka.
Inkastoo ay jiri karaan tallaabooyin kale ee isbedel ku imaan karo, haddana aniga waxay ila tahay in dhamaan arrimaha aan kor ku soo sheegay ay noqon karaan aasaaska lagu gaaro isbedel gun iyo baar ah oo lagu heli karaa daaweynta amuuraha xanuunka badan ee Soomaaliya maanta yaal. Afar sano ee soo socota waa muddo kooban oo sida hilaaca oo kale dalka ku dhaafi karto, waxaa sidaas daraadeeda dawladda laga rabaa inay soo saarto qorshe iyo barnaamij shaqo oo waqtiyeysan oo dhamaan hawlahaas lagu qabanayo oo ay ku shubto DHIIG CUSUB ee nolol iyo naruuro geliyay geedi socodka loogu tallabsanayo inuu shacabku gaarsiin doono xilli ay dku doortaan nidaam dawladnimo oo ku yimida hal cod hal qof waxaa loo yaqaan (universal suffrage).
Shacabka Soomaalida kuwa ku nool dalka gudihiisa iyo qurbo joogta hadaaney dawladda ku taageerin isbedelka la sheegay waxaa dhacaysa in gobannimada Soomaaliya la waayo dalkana uu u gacan galo cadaawo aan sina uga kici doonin. Shacbka waa inuu gacan bir ah isaga celiyo kuwo isbedel diidka ah ee dalka gudihiisa iyo caadawaha dibedda oo Soomaalia laf dhuun gashay ku noqotay sidii ay ku soo ceshan lahayd gobannimadeeda iyo qarannimadeeda.
Email address: walayo@hotmail.com